Amanqaku kaMichael Grigsby Martech Zone |
Amanqaku ngu UMichael Grigsby
Ke sihlala sifuna ukwazi ukuba i-marcom (unxibelelwano lwentengiso) lwenza njani, njengesithuthi kunye nephulo lomntu ngamnye. Ekuvavanyeni i-marcom kuqhelekile ukusebenzisa uvavanyo olulula lwe-A / B. Le yindlela apho iisampulu ezingahleliwe zivelisa iiseli ezimbini zonyango lonyango. Iseli enye ifumana uvavanyo kwaye enye iseli ayiyi kuyenza. Ke inqanaba lokuphendula okanye ingeniso yomvuzo ithelekiswa phakathi kweeseli ezimbini. Ukuba uvavanyo lweseli ligqithise kwiseli yolawulo